Report: Secret State of Myanmar သတင်းလျှို့ဝှက်ချက်ယဥ်ကျေးမှုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ – Free Expression Myanmar
Jul 26, 2021 by Coordinator	in Publications ထုတ်ဝေစာများ
မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်ပယ်စုံတွင်ပျံ့နှံ့နေသော တရားဝင်လျှို့ဝှက်ချက်ယဉ်ကျေး မှုအား စွဲကိုင်ထားသည်။ မူဝါဒနှင့် ဘတ်ဂျက်များကဲ့သို့သော အများပြည်သူအ ကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အစိုးရက ယခုအ ချိန်ထိ တောင်းခံရခြင်းမရှိဘဲ လိုလိုလားလား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါ။ RTI ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်း အများအားဖြင့်ဆက်သွယ်၍မရနိုင်ပါ။ ဆက်သွယ်၍ရပြန်သည့် အခါတွင်လည်း ၄င်းတို့သည် RTI ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို မသိရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏ တောင်းဆိုမှုများကို မလေးမစားဆက်ဆံတတ်ကြသည်။ ၄င်းတို့၏လျှို့ဝှက်ချက် ကို ကာကွယ်ခြင်းသည် တန်ပြန်သဘောအရ ၄င်းတို့အား အများပြည်သူမှ တာဝန်ခံစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်အထောက်ကူပြုသည်။
SDG ပန်းတိုင်များအား အကောင်အထည်ဖော်နေမှုကို နိုင်ငံအဆင့်ဆန္ဒအ လျောက် သုံးသပ်တင်ပြသည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် လုပ်ငန်းစဉ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အနေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း အစိုးရ၏ SDG ၁၆.၁၀ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို နည်း စနစ်ကျကျ လေ့လာဆန်းစစ်ရန်အတွက် FEM မှ အကြီးတန်းသတင်းထောက် အယောက် ၂၀ ဦးကို ခေါ်ယူ၍ ၎င်းတို့ကို “RTI ဆန်းစစ်လေ့လာသူများ” အဖြစ် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် RTI ဥပဒေတစ်ရပ် သတ်သတ် မှတ်မှတ်မရှိသေးသော်လည်း SDG နှင့် MSDP ကတိကဝတ်များမှာ ပိုမိုကျယ် ပြန့်ပြီး၊ မူဝါဒများနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ကျယ်ပြန့်သည့် အပြောင်းအလဲများ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း တိုင်းတာနိုင်၍ တိုင်းတာသင့် သည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်နေသည့် အစိုးရ၏သတင်းလျှို့ ဝှက်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အချိန်လိုအပ် သလို လုံ့လစိုက်ထုတ်၊ ကြိုးပမ်းရန်လည်း လိုအပ်ပေမည်။ သို့ရာတွင် RTI လေ့လာဆန်းစစ်သူ များအနေဖြင့် အဆိုပါလုပ် ငန်းစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်နေပြီဆိုသည့် အထောက်အထားတစ်စုံတရာ မတွေ့ရှိရသေးပေ။ SDGs နှင့် MSDP တွင်ပါဝင်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ ကတိ ကဝတ်များကို အောင် မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုပါက မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ၄င်း၏ချဥ်းကပ်ဆောင်ရွက်ပုံကို ဆောလျင်စွာပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Read the report (in Myanmar) >>
ယခုအစီရင်ခံစာအား စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ရက်အနည်းငယ်က ပြုစုပြီးစီးခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်များသည် သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးအပါအဝင် လူ့ အခွင့်အရေးများအားလုံးကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရမှ နိုင်ငံ၏ SDGs လုပ်ငန်းစဥ်တိုးတက်မှုအား ကုလသမဂ္ဂသို့တင်ပြရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံအဆင့်ဆန္ဒအလျောက် ပြန်လည်သုံး သပ်မှု အခြေအနေမှာလည်း အတတ်မသိနိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာအနှံ့မှလူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချင်းချင်းအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ SDG ၁၆.၁၀ ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်မှုကို ဆန်းစစ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာစေရန်နှင့် ယခုသုတေသနလုပ်ငန်း တွင် ပါဝင်ပတ်သတ်ခဲ့သူအယောက်စီတိုင်း၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များကို အသိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုရန်အတွက် FEM မှ ယခုအစီရင်ခံစာအား ဒေသနောက်ခံအခြေအနေမှတ်တမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ရန် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar retainsapervasive culture of official secrecy. Information on topics of public interest, such as on policies and budgets, is still not proactively disclosed by the government. Officials who bear RTI duties are largely inaccessible. If found, they are unaware of their RTI responsibilities and are dismissive of public demands for transparency. Their defence of secrecy in turn helps them avoid public accountability.
In preparation for the SDG Voluntary National Review in 2021, FEM brought together 20 senior journalists and trained them as “RTI Auditors” to methodologically investigate and test the government’s implementation of SDG 16.10 across Myanmar. Although Myanmar does not yet haveaspecific RTI law, the SDG and MSDP commitments are broader and require widespread changes in policies and practices, each of which can and should be measured.
Countering decades of engrained official secrecy will take time and effort, but the RTI Auditors have found no evidence that this process has even been started yet in Myanmar. The government must urgently reassess and reinvigorate its approach if it is to achieve its international and domestic commitments in the SDGs and MSDP.
This report was completed just days before the military’s coup d’état on 1 February 2021. The military’s actions have violated human rights, including the right to information. The status of the UN’s Voluntary National Review into Myanmar’s SDG progress, due in July 2021, is unknown. However, FEM has decided to publish this report asacontextual record, to inspire global peers on testing local implementation of SDG 16.10, and in recognition of the hard work done by all those involved.
Tagged with: Media freedom, Right to information, SDG 16.10, United Nations